अक्सिजन भर्न धमाधम उठाइँदैछ बेवारिसे सिलिन्डर | Ratopati
विज्ञ भन्छन्, ‘जुन पायो त्यही सिलिन्डरमा अक्सिजन भर्दा बिरामीको ज्यान सक्छ’
personमाया श्रेष्ठ exploreकाठमाडौं access_timeजेठ ४, २०७८ chat_bubble_outline0
तर, अक्सिजन भर्न पुग्नेहरूले आप्mनो हात रहेको सिलिन्डर अक्सिजन ग्यास भर्न मिल्ने सिलिन्डर हो या होइन भनेर थाहा पाउन पनि अत्यन्त जरुरी रहेको नेपाल अक्सिजन ग्यास उत्पादक संघका अध्यक्ष गौरव शारडा बताउँछन् । सरकारले अघिल्लो हप्ता विभिन्न उद्योगहरूबाट रित्ता अक्सिजन सिलिन्डर जफत गर्नुका साथै सरकारले वर्षौँदेखि कवाडी स्थालमा थन्किएका सिलिन्डरसमेत संकलन गरिरहेको छ । कतिपय नागरिकले जहाँ खाली सिलिन्डर पाइन्छ, त्यहीँबाट उठाउने पनि गरेका छन् ।
बिरामीले लिने अक्सिजन किन उद्योगहरुमा प्रयोग गरिन्छ ?
अक्सिजनको अभाव भएपछि सरकारी तथा व्यक्तिगत तवरबाट भेटाएकाजति खाली सिलिन्डर धमाधम उठाउने काम भइरहेकाले बिरामीका लागि खतरा सावित हुने चेतावनी दिए । ‘रुवावासी गर्दै पहिला अन्य ग्यास भरेको सिलिन्डर लिएर अक्सिजन भर्न बिरामीका आफन्त कम्पनीमा आइपुगेको उदाहरण छन्,’ अध्यक्ष शारडा भन्छन् । अन्य ग्यास भरेका सिलिन्डर लिएर लाईन बस्नेलाई चिनेर फर्काइदिएको उनले सुनाए । ‘तर, कम्पनीका काम गर्ने मध्ये धेरैलाई कोभिड भएकाले कामको बढी चाप छ, जुन सिलिन्डर ल्याए पनि त्यसमा भरेर हतारमा पठाउने काम भइरहेको हुनसक्छ,’ उनले थपे, अहिले मानवीय संकट भएपछि कुन कम्पनी सिलिन्डर हो भनेर समेत राम्रोसँग धेरै हेरेका छैनन् । कम्पनीले पहिला अन्य विषाक्त ग्यास भरेको सिलिन्डरमा अक्सिजन ग्यास भरेर पठाए के हुन्छ ?’
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारी पनि विषादीयुक्त ग्यास भरिएका सिलिन्डरमा अञ्जानमा अक्सिजन भरिए स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुुर्याउनुका साथै बिरामीको ज्यानै पनि जानसक्ने बताउँछन् ।
‘नेपालमा अक्सिजन ग्याससँगै अन्य विभिन्न प्रकारका ग्यासहरु उत्पादन गरिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा कावर्डअक्सिाइड, नाइटोजन आर्गन, सल्फर जस्ता ग्यासको प्रयोग गरिन्छ । यी ग्यासका सिलिन्डरहरू एउटै प्रकारका देखिन्छन् । अक्सिजन भरिदिने कम्पनी र अक्सिजन लैजाने व्यक्ति र संस्थाले समेत महामारीको आपत्तकालिन समयमा सबैले सिलिन्डरको बारेमा थाहा पाउन जरुरी छ,’ डा.राजभण्डारी बताउँछन् ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवर भने प्रहरीले हालसम्म संकलन गरिएका सिलन्डरहरु अक्सिजनकै भएको बताउँछन् । ‘सङ्कलन गरिएका सिलिन्डरमध्ये अञ्जानमा कुनैमा विषाक्त ग्यास राखेको परेको भए ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘ अक्सिजन भर्नुु अघि कम्पनीले त्यसलाई जाँच गर्छ होला ।’